တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်လေးလံသောချောချောထုပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
အကြီးစားတာဝန် slurry စုပ်စက်
MAH မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောစုပ်စက်ကိုအရွယ်အစား ၁ လက်မမှ ၁၈ လက်မထိအထိရရှိနိုင်ပါသည်။ စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ၁၀.၈ မှ ၅၄၀၀ m3 / h နှင့်မြင့်မားသောခေါင်းစီးမော်ဒယ်များအတွက် ၁၂၅ မီတာအထိထိသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်အထူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမျိုးအစားကိရိယာများဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသော slurry နှင့် slurryur များအားစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတု၊ စက္ကူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ကြွေထည်၊ လျှပ်စစ်ကြွေနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
Flow range - 12-28m3 / hr
ဦး ခေါင်းအကွာအဝေး: 6-65m
- ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား - ၅၉၀ * ၃၇၀ * ၃၇၀ မီလီမီတာ
အဆိုပါ hevey တာဝန် slurry စုပ်စက်ရဲ့ features တွေ
2. Eco nomical နှင့်လက်တွေ့
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စေ့စေ့နားထောင်။
- ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်
မြန်ဆန်သောအရည်အသွေးမြင့် ၀ န်ဆောင်မှု - ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။
- ထောက်ပံ့ရေးပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များကိုအရည်အသွေးကောင်း၊
A: Centrifugal pump တွင် slurry pump, gravel pump၊ သန့်ရှင်းသောရေစုပ်စက်၊ မိလ္လာစုပ်စက်၊ ဓာတုစုပ်စက်၊
Q2: သင်၏ MOQ, ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းနှင့် ဦး ဆောင်အချိန်။
A: centrifugal စုပ်စက်များအတွက် MOQ 1 set ကိုဖြစ်ပါတယ်။
A: ငွေပေးချေမှုကာလ - T / T, L / C၊ Western Union, Paypal နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် slurry pump အတွက်အလုပ်လုပ်ရန် ၇ ရက်၊ ရေစုပ်စက်အတွက် ၁၅ ရက်။
A: အရည် - ___; pump စွမ်းရည် ___ m3 / h; PH: _____; pump ခေါင်း: ___m; အထူးဆွဲငင်အား __၊ ဗို့အား ___V; ကြိမ်နှုန်း ___Hz
Q6: OEM အစိတ်အပိုင်းများရရှိနိုင်ပါသလား
A: အသေးစိတ် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုပေးပို့ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါသည်။
hot Tags:: အကြီးစား, Slurry Pump, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်း, ဝယ်, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, စတော့အိတ်, Bulk, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, တရုတ်, လုပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, စျေး, စျေး, စာရင်း, နောက်ဆုံးပေါ် , အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်း